Tahriibayaal Soomaali ah oo la siinayo lacago magdhow ah kadib markii dib loogu celiyey Libya - iftineducation.com
Tahriibayaal Soomaali ah oo la siinayo lacago magdhow ah
iftineducation.com – Maxkamada Yurub ayaa waxaa ay amartay dowlada Talyaaniga inay siiso kumanaan Yuro ah 24 ruux oo Soomaali iyo Eritrean ah kuwaasoo ka soo cararay dalka Talyaaniga oo gaaray xeebaha Talyaaniga sanadkii 2009.
Markab dagaalo oo dalka Talyaaniga laga leeyahay ayaa dadkan tahriibka ah waxa ay ka soo qabteen badda Mediterranean waxana ay dib ugu celiyeen dalka Libya iyagoo gacanta loo geliyey dowlada Libya.
Maxkamada Yurub ee xuquuqda aadanaha ayaa khamiistii shalay waxa ay sheegtay in dadka tahriibka ay kala kulmeen gacanta xukuumada Libya dhibaatooyin iyadoo lagu xirey dalka Libya isla markaana mudan karay in dib loogu celiyo dalalka Somaliya iyo Eretrea halkaasoo ay xarig ama jirdil ay kala kulmi kareen.
Sida lagu daabacay AP Maxkamadan ayaa wax ay ku xukuntay qof kasta oo ka mid ah dadkaas tahriibka ah in la siiyo lacag dhan $20,000 iyo lacagaha kale ee ku baxay dacwada.
Maxkamada ayaa xustay in dadkan tahriibka ahaa ayaa kala tageen isla markaana dadkii u doodayay ayba la xiriiri waayeenqaar kamid ah, mana cada sida lacagahaas magaadhowga ah loo gaarsiin lahaa dadkii lahaa.
Hore ayaa hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga UNHCR waxa ay u eedeysey siyaasada ah in dadka tahriibaya badda laga celiyo iyadoo aanla weydiin sababaha ay u soo cararayaan.
Siyaasada ah in dib looga celiyo badda dadka tahriibka ah ayaa waxaa hore u kala saxiixday sanadkii 2008dii hogaamiyihii Libya Mucammar Alqadafi iyo R/wasaarihii hore ee Italy Silvio Berlusconi kaasoo dhigayay in dowlada Libya ay ka caawiso Talyaaniga sidii loogaga hortagi lahaa dadka magangalyo doonka ah ee soo galaya dalka Talyaaniga.
Illaa iyo hadda ma cada sida dadkan tahriibka ahaa ee dib loogu celiyey dalka Libya ay u heli doonaan lacagtan magdhowga ah ee u xukuntay maxkamada Yurub.